sosegado : သိပ် မုန်းဖို့ကောင်းတဲ့ မိန်းမ အပိုင်း၂
Posted by sosegado at 7/25/2013 11:56:00 AM
ကိုယ်သွေးသား မဟုတ်ပဲ လူတွေ သားသမီး အဖြစ် ချစ်တတ်ကြပါတယ်
မဖတ်ရတာကြာတော့လွမ်းတယ်ဆို - - -ပိုလေမလား
DNA တော့ စစ်စေချင်တယ်အေ...။
မတင်မကျ ဖြစ်တာတော့ မခံစားနိုင်ဘူး...။ :(
Khin Oo May ကောင်းတယ်။။်
Khin Oo May အမြဲကောင်းတာပါဘဲ။
Khin Oo May ကိုဘ ပြောတာ နားထောင်လိုက်ပါ အဟိ.
Khin Oo MayီDNA မစစ်တောင် သွေးတော့စစ်ပါ. A လား ဘီလား. အိုလား. အများကြိးလွဲသွားရင် ဒီအန်အေ ဆီမရောက်တော့ဘူးပေါ့.
ဗီလိမ် လူဆိုးတွေက အပြင်ကအတိုင်းပဲ
ဖတ်၍ ကောင်း၍ ခံစားရသည်
ခပ်ညံညံ တွေ ဆိုမကြိုက်ဘူး .. သူ့ခမျာ သနားစရာ ခပ်ညံညံ မိန်းမရော သမီးရော .. ရက်စက်ပ
တကယ့်ကို သုတရသ စုံအောင် အလွမ်းအကြမ်း စုံအောင် ပုံဖော်ရးတတ်လိုက်တာလို့ ချီးကျူးမိပါတယ်။ တချို့ကိစ္စတွေ (သူ့ထက်သူ လူစွမ်းကောင်းပုံပြင်တွေ အကြောင်းတွေ)ကို အခုမှပိုသိသွားတယ်။
တော်သေးတယ်။ ကိုဆိုဆီလည်း လူစွမ်းကောင်းနဲ့ အပေါင်းအသင်းဖြစ်နေသေးလို့...။
ဒုတိယပိုင်းအစမှာ ဇာတ်က တစ်မျိုးဖြစ်သွားလို့ နည်းနည်းတွေသွားသေးတယ်...နောက်တစ်ဇာတ်ပြောင်းလိုက်သလားလို့...ဆက်ဖတ်တော့မှ ဇာတ်ရည်လည်သွားတယ်...နှစ်ကန့်ခွဲပစ်လိုက်တော့ ပိုလှသွားတယ် ဆိုရမယ်ထင်ပါရဲ့...
အေးဗျာ...ဇာတ်ကောင်နေရာကနေ ၀င်စဉ်းစားမိတယ်...ကိုယ်သာဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ပေါ့...အနှီလို မိန်းမျိုးကတော့ ကြောက်သဗျာ...သို့ပေမင့် တူသောအကျိုးပေးသွားတာပါပဲ...
I always read your post but i am not interested your first part so i dun read it. Now I read your second post and want to know who are they..
Now i have read the whole post and know who they are.....
Also visit my web-site; auto blogging